Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana Eoropeana » Fiatoana tanàna kely indrindra sy mora vidy indrindra eto an-tany
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • culinary • Kolontsaina • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • Resorts • tompon'andraikitra • fiantsenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny fiatoan'ny tanàna dia mety ho lafo, nefa miankina amin'ny toerana halehany izany, ary misy fiatoana tanàna izay lafo kokoa noho ny hafa.
Ny fialan-tsasatra an-tanàna voalohany indrindra amin'ny lisitra dia ny renivohitra Arzantina Buenos Aires.
Istanbul no tanàna faharoa mora indrindra ao amin'ny lisitray.
Toerana fahatelo any Amerika atsimo no maka ny laharana fahatelo, amin'ity indray mitoraka ity Rio de Janeiro.
Ny fitsangantsanganana an-tanàna no fialan-tsasatra haingana sy vintana ahazoana ny kolontsaina, sakafo, fiainana amin'ny alina ary fiantsenana tsara indrindra izay atolotry ny toerana iray mandritra ny roa andro monja.
Mety ho lafo ihany koa izy ireo, saingy miankina amin'ny toerana halehany izany, ary misy fiatoana tanàna izay lafo kokoa noho ny hafa.
Ka tanàna iza no mora vidy indrindra raha mikasa ny hiala amin'ny 2021 ianao? Mba hahalalana izany, ireo manam-pahaizana momba ny dia dia nanadihady fiatoana tanàna 75 malaza eto an-tany amin'ny vidin'ny zavatra toy ny efitranon'ny hotely, misakafo any amin'ny trano fisakafoanana, na labiera mangatsiaka mahafinaritra.
Fiatoana tanàna mora vidy indrindra eto an-tany
1. Buenos Aires, Arzantina
Ny fiatoana an-tanàna voalohany indrindra amin'ny lisitra dia ny renivohitr'i Arzantina Buenos Aires, izay firenena mora vidy indrindra amin'ny salan'isa divay misy divay ($ 3.10) sy tapakila tokana amin'ny fitaterana eo an-toerana ($ 0.27).
Tsy tanàna mora vidy ihany izy io, fa ity tanàna midadasika sy be olona ity dia betsaka ny zavatra azo jerena sy atao, ao anatin'izany ny lapan'ny filoham-pirenena mihaja, Casa Rosada, ny tranon'ny opera Teatro Colón, ary ny tranombakoka MALBA.
2. Istanbul, Torkia
Miorina eo amin'ny sisin-tany manelanelana an'i Eropa sy i Azia eo amoron'ny Ranomasin'i Bosphorus, Istanbul no tanàna faharoa mora indrindra ao amin'ilay lisitra, miaraka amin'ny vidiny mirary manerana ny solaitrabe, ao anatin'izany ny $ 0.40 ho an'ny tapakila na $ 0.41 isam-kilometatra ho an'ny taxi. .
I Istanbul no tanàna eropeana mora vidy indrindra izay nojerenay, miaraka amin'ny ankamaroan'ny toerana mora vidy hafa any Amerika atsimo na Eropa atsinanana, ka raha mila fitsangatsanganana eoropeana mafana manome ny tsara indrindra atsinanana sy andrefana ianao dia mety hojerena !
3. Rio de Janeiro, Brezila
Toerana fahatelo any Amerika atsimo no mahazo ny toerana fahatelo, amin'ity indray mitoraka ity Rio de Janeiro any Brezila. Rio dia manana ny anaram-boninahitra malaza amin'ny tanàna mora indrindra ao anaty lisitra noho ny volavola labiera, $ 1.34, tonga lafatra amin'ny fialan-tsasatra amoron-dranomasina Copacabana na Ipanema!
Ny zava-mahasarika indrindra eto amin'ity tanàna ity dia ny sarivongana Christ the Redeemer, raha maro kosa no misafidy ny hitsidika mandritra ny fetiben'ny Fetibe.
Fiatoana tanàna kely vidy indrindra eto an-tany
1. Zürich, Soisa
Fantatra amin'ny maha firenena lafo vidy azy i Suisse, mainka izany any amin'ireo tanàna lehibe toa an'i Zurich, izay tanàna lafo indrindra ho an'ny taxi sy ny fitateram-bahoaka, ka mety te-haninjitra ny tongotrao ianao ary handeha raha mitsidika ianao!
Angamba tsy tokony hahagaga izany, satria i Zürich dia iray amin'ireo kapitalin'ny banky sy fitantanam-bola eto an-tany!
2. Reykjavík, Islandy
Reykjavík dia mitana ny laharana faharoa amin'ny lisitry ny tanàna lafo vidy indrindra hitsidika azy, izay handoavanao vola eo ambanin'ny $ 200 isan-kariva amin'ny trano fandraisam-bahiny, miaraka amina labiera volafotsy 10 $ eo ho eo eo ho eo!
Ny renivohitr'i Islandy dia mbola mendrika ny hotsidihina ihany, na hijery ny tantaran'ny Viking ao an-tanàna sy ny maritrano manaitra na ho fototra hijerena ny sisa amin'ity firenena tokana sy tsara tarehy ity.
Tanàn-dehibe Suisse iray hafa no mitana ny laharana fahatelo, miaraka amin'i Geneva manana ihany koa ny vidin'ny sakafo avo indrindra amin'ny trano fisakafoanana, amin'ny $ 30.56 isan'olona (mariho fa any amin'ny trano fisakafoanana an-dalambe koa io, fa tsy fananganana kintana dimy).
Raha afaka mamoaka ny vidiny anefa ianao, dia hahazo tanàna tsara tarehy miorina amin'ny tendrombohitra Alpes sy Juras, miaraka amin'ny fahitana tsara an'i Mont Blanc sy ny Lake Genève.